चुनाब हार्नुमा पार्टी कै नेताहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्छः कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा (भिडियो) | KTM Khabar
२०७५ बैशाख १९ गते १०:४९ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । पुर्वी पहाडी जिल्ला ओखलढुंगाका पुर्व–सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन रामहरि खतिवडा । यस पटकको चुनाबमा देशब्यापी कांग्रेस पार्टी पछाडी परेसंगै उनले पनि आफ्नो पक्षमा निर्बाचन पार्न सकेनन् । हार्नु जित्नुसंग धेरै अन्तर नदेख्ने तर जनताको कामलाई महत्वपुर्ण रुपमा लिने उनै पुर्व–सांसद खतिवडासंग समसामयिक विषयमा केटिएम खबरका लागि रवि भट्टराईले विशेष सम्वाद गरेका छन । प्रस्तुत छ सोही भिडियो कुराकानीको संपादित अंश:
हामी राजनीतिमा लागेका मान्छे फुर्सद प्राय नहुने रहेछ । समाजसेवा हरप्रकारकोे हुँदो रहेछ । साथीहरुले विबाह, ब्रतबन्धमा बोलाउनु हुन्छ त्यहा जानै पर्यो । कहिले विभिन्न कार्यक्रममा बोलाउनु हुन्छ त्यहा पनि जानै पर्यो । पहिले सांसद हुदा भन्दा केही कम ब्यस्तता जस्तो भन्यो त्यो नहुदो रहेछ । जिल्लाका बिभिन्न गतिबिधि, सामाजिक कार्यमा पनि म पुग्नै पर्यो । तपाईलाई थाहानै छ । यो भन्दा पहिले सांसद हुदा आफ्नो तलब भत्ता जनतालाई नै सुम्पिएर जनताको सेवाको लागी घर–घरमा नै सिडियोको टोली लगेर नागरिकतादेखि हर किसिमका जनसरोकारका विषयलाई मैले जनतालाई राहत पुर्याउने काम गरेको थिए । मलाई खुशि पनि लाग्छ । जनताका काम गर्न पाउनु मेरो अहोभाग्य पनि हो । चुनाब पराजय पछि पनि मैले जनताका विचमा बोलेका कुरा मैले हारौ या जितौ पुरा गर्ने छु भनेर बाचा गरेको थिए । त्यो बाचा पुरा गर्दै छु । तपाईलाई जानकारी गराउ चुनाब सकिएको पाँच महिना भयो । त्यस पछि पनि म सात पटक जिल्लामा पुगे र जनसरोकारका विषयमा खबरदारी गरि रहेको नै छु । मैले भर्खरै ओखलढुंगाका बिभिन्न दुर्गम वडाहरुमा पनि साथीहरुसंग भेटघाट गरेर फर्केको हुँ ।
चुनाब तपाईको पक्षमा अएन नी ?, कारण तपाईसंग जनता थिएनन् भन्ने बुझ्नु पर्यो हो ?
यसलाई यसरी नबुझौ । जनता मसंग थिएनन् भन्ने त हुदै हैन । जनताको मया सद्भाव थियो र अझै छ । रामहरिलाई माया नगर्ने ओखलढुंगामा जनता तपाईले भेट्नु हुन्न । तर चुनाब टेक्निकल कारण भनौ न । देश भरि कांग्रेस पछि देखिएको एक प्रकारको लहरमा म परे भन्नु पर्यो । म स्पष्ट बोल्ने मान्छे हुँ । मैले मेरो जिल्लामा लगभग ४ अरब भन्दा बढि रुपैया स्कुल निर्माणमा लागेको छ । त्यो मेरो नै इनिसियसनमा भएको हो । मैले भुकम्प ग्रसित जिल्ला घोषणामा पहल नगरेको भए त्यहा अहिले बिभिन्न लगानिहरु जादैन थिए ।
हामीले सुनकोसीको पुल मात्र बनाएनौ भर्खरै नवरपुरको पुल पनि धमाधम काम भैरहेको छ । केहि दिन पहिले सिरेसो पुलको काम सुरु गराएका छौ । चुनाब हारे पछि पनि मैले भनेका बाचाहरु पुरा गरि रहेको छु र यो क्रम जारी रहने छ । तर पनि जनताले मलाई जिताउनु भएन भनौ न । मेरा विपक्षी साथी जित्नु भएको छ । तर तपाईलाई म भनौ मेरो पक्षमा नतिजा नआए पनि जनसरोकारका विषमा म कुनै कसर बाकि राख्ने छैन ।
तपाईको पक्षमा मात्र हैन, समग्र रुपमै पार्टी पछाडी पर्यो कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
मेरो जिल्लामा दुई पार्टीको गठबन्धनले भन्दा पनि गाँठ बन्धनले हामी हार्यौ । गुटबन्दिले पछि पर्यौ । अझ बुझ्ने गरि भनौ पार्टी भित्रैबाट असहयोगको वातावरण समेत श्रृजना भयो । एका तर्फ दुई ठुला पार्टीहरु मिलेर चुनाबमा जाने । अर्को तर्फ हामै्र साथीहरु सहयोग नगर्ने । अब भन्नुहोस् कसरी जितिन्छ चुनाव ? यो मेरो क्षेत्रमा मात्र हैन सबै ठाउँमा यस्तै भएको हो । कांग्रेस भित्रको रोग हो यो । एउटाले अर्कोको अस्तित्व स्विकार्न नसक्नु । यो रोगलाई निर्मुल पार्न जरुरी छ । मैले भने बहुदलमा चुनाब जित्नु हार्नु भनेको सामान्य कुरा हो । त्यसकारण एउटा ब्यक्तिले चुनाव हार्दै गर्दा लोकतन्त्रले हार्न भएन । विकास निर्माणका काम रोकिन भएन भन्ने चाहीँ प्रमुख हो ।
अब अहिले ओखलढुँगे जनताको सरोकारलाई लिएर के गर्दै हुनुन्छ ?
म हिजो सदनमा हुँदा जुन भुमिकामा थिए, जनसरोकारका विषयमा त्यही भुमिकामा रहन्छु । फरक यत्ति मात्र हो हिजो म सदनमा जान्थे तर आज सदनमा उपस्थित हुन्न । रामहरिले गरेन हैन भन्ने वाताबरण तपाईले पाउनु हुने छैन ।
तपाईले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
हामीले धेरै ठुला कुरा गरेका छौ । भाषण उखान टुक्का धेरै छाटेका छौ तर भाषण गरेर मात्र देश विकास हुदैन । तपाईलाई भनौ मेचि–महाकाली रेल बोल्ने वित्तिकै बन्दैन र सगरमाथामा केवलकार पनि टुक्का हान्दैमा बन्दैन । स–साना काम पहिले गर्नुपर्यो अनि ठुलाकामको जग बस्दै जान्छ । यहाँ त जगनै नहाली १० तले घर बनाउन खोजिदैछ । सरकार बनेको यत्रो समय भयो काम गर्ने लक्षण देखिन सकोको छैन । त्यसकारण पहिले जग निर्माण गरेर लगानिको वातावरण श्रृजना गर्न लाग्नु पर्यो ।
बाम गठबन्धनको सरकारले रेलको कुरा गर्र्दै छ, घर–घरमा ग्यासको पाईप लाईनको कुरा गर्दै छ, पानिजहाजको कुरा पनि छ, के यो संभव देख्नु हुन्छ ?
केपी ओली जी नेपालको राजनीतिमा धेरै पुरानो मान्छे योगदानको हिसाबले पनि उहाँको योगदान धेरै छन् । यसमा कुनै शंखा उप–शंखा रहेन । तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमि तिर भन्ने उखान जस्तो उहाँको यो राज्य सत्ता आरोहण नहोस भन्ने हाम्रो भनाई हो । नेपालमा सिमित श्रोत साधन छन् । लगानिको वातावरण अझ श्रृजना भएको छैन । तर उहा उखान कै भरमा सबै हुन्छ भन्दै हिड्नु भयो भने त्यो त ठिक भएन नि । धेरै स–साना कुरा बनाउन बाकि नै छ । त्यसलाई ध्यान दिनुको सट्टा उहाँ उखानमा हिडेको महसुस हुन्छ । तर त्यस्तो वातावरण नहोस भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
चुनाब सकिएसंगै कांग्रेस कमजोर भयो र अब यो कांग्रेसबाट जनताले आश के गर्ने ?
कांग्रेस कमजोर भएको छैन । यसरी नबुझि दिनु होला । आजसम्मका सबै उपलब्धि कांग्रेस कै नेतृत्वमा भयो र विकास पनि हामीले नै गर्ने हो । म तपाईलाई भनौ अझ सशक्त भएर जनसरोकारका विषयलाई खरो रुपमा आत्मसाथ गर्दै हामी आउछौ । अव तपाईलाई भनौ मेरो जिल्लामा कसरी चुनाव हारियो ? भन्ने कुरा म जिम्मेवारी लिन तयार छु र पछि एक नम्बर बनाएर चुनाब जिताएर पनि ल्याउने जिम्मा लिन्छु । त्यस्तै समग्र कांग्रेस हारको जिम्मा पनि नेताहरुले नै लिन जरुरी छ । आफुलाई आत्मआलोचना गर्दै फेरि गृहकार्य गर्न जरुरी छ । जनता हाम्रै पक्षमा छन । हारको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्छ, महामन्त्रिले लिनु पर्छ र अन्य बरिष्ठ नेताहरुले लिनै पर्छ । हिजोका नेताहरु पार्टीलाई परिवार सम्झन्थे, अहिलेका नेताहरु परिवारलाई पार्टी सम्झन्छन अनि कसरी चुनाब जितिन्छ ? त्यसैले अब तलदेखि माथिसम्म आ–आफ्नो कमजोरीलाई औल्याउदै एक ढिक्का भएर गएको खण्डमा हामीलाई फेरि जनताले पहिले कै बनाउने छन् ।
यहाँलाई र केटिएम खबर परिवारलाई मेरा कुराहरु राख्ने अवसर दिनु भएकोमा धन्यवाद ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडासंगको भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः